Qaramada Midoobey oo Dalbatay in Soomaaliya laga Taageero Dagaalka Alshabaab – Radio Daljir
Qaramada Midoobey oo Dalbatay in Soomaaliya laga Taageero Dagaalka Alshabaab
Luulyo 20, 2017 9:51 b 0
Qaramada Midoobey ayaa ka codsaday Beesha Caalamka in ay si xoogleh ay ula shaqeeyaan Soomaaliya si looga guuleysto Al-Shabaab oo ay sheegeen in ay adag tahay in laga adkaado hadii Caalamka oo dhan aysan taageero buuxda siinin Soomaaliya.
Antonio Guterres Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey oo khudbad uu kaga hadlaayay Xaaladda Qaaradda Afrika jeediyay ayaa Beesha Caalamka ka dalbaday in la gacansiiyo dalalka Afrika si ay u yeeshaan ciidan xooggan oo xalinkara marka ay yimaadaan isku dhacyo.
Khudbadda oo uu jeediyay xubno ka tirsan Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey , waxaana uu ku sheegay in hadda la doonaayo in si deg deg ah wax looga qabto Al-Shabaab iyo Boko Haram oo sheegay in ay yihiin Caqabada ugu weyn ee Afrika.
Waxaa uu sidoo kale tilmaamay in ay muhiim tahay in taageero badan la siiyo Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM oo uu sheegay in ay dagaal xooggan ay kula jiraan Al-Shabaab.
“ Waxaan Aaminsanahay hadii la taageero ciidamada AMISOM ,islamarkaana la xoojiyo dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in Al-Shabaab looga guuleysan karo si dhaqsiyo leh ama lagu jabinkaro” ayuu yiri Antonio Guterres Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey
Waxaa uu sidoo kale intaasi hadalkaasi uu kusii daray ay muhiim tahay in Soomaaliya laga taageero dhismaha kaabayaasha Dhaqaalaha.
“Hadii ay adduunku usoo jeestaan Soomaaliya muddo yar ayaa lagu xasilinkara dalka oo dhan , islamarkaana lagu ciribtikaraa kooxaha Argagixisadda ah” ayuu yiri Antonio Guterres.
Koonfur Galbeed oo Gurmanaysa iyo Alshabaab oo Duulaan Ku ah Sh Mukhtaar Roobow
on Farriin Hay’adda ASHINAGA JAPAN iyo iskolorshiibka ardeyda Soomaaliyeed ee dhammaysay dugsi sare (dhegayso)Ilaah hakuu fududeeyo wallshy Qaaliya Umayma